Miyaa Kooxaha Loo Ogol Yahay Inay Heystaan Koobka Rasmiga Ah Ee Premier League & Champions League? Kooxahee Koobka Rasmiga Ah La Siiyay? - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMiyaa Kooxaha Loo Ogol Yahay Inay Heystaan Koobka Rasmiga Ah Ee Premier League & Champions League? Kooxahee Koobka Rasmiga Ah La Siiyay?
Miyaa Kooxaha Loo Ogol Yahay Inay Heystaan Koobka Rasmiga Ah Ee Premier League & Champions League? Kooxahee Koobka Rasmiga Ah La Siiyay?
April 13, 2021 Saed Mohamed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League, Xulashada Laacib 0
Marka laga hadlayo in kooxaha ay keydsadaan koobka asalka ah ee ay ku guuleysteen waxay ku xiran tahay tartamada iyo dhaqanka u yaalak marka laga hadlayo inay koox ceshato koobka rasmiga ah ee ay ku guuleysatay.
Caadiyan, kooxaha si ku meel gaar ah ayay u heystaan koobka rasmiga ah ee ay ku guuleyteen ama waxaa la siiyaa mid la minguuriyay oo muuqaal eg midkii ay ku guuleysteen.
Kooxda ku guuleysata horyaalka Premier League waxay koobka heysataa muddo kooban ka dib marka ay ku guuleystaan, waana inay u celiyaan maamulka horyaalka ugu yaraan seddex todobaad ka hor inta uusan dhamaanin xilli ciyaareedka.
Xaqiiqdiina waxaa jirta labo koob oo Premier League ah oo isku eg – mid waxaa hal xilli ciyaareed heysata kooxdii ku guuleysatay halka mid kale uu gacanta ugu jiro maamulka horyaalka.
Inkastoo kooxaha ku guuleysta horyaalka Premier League aysan ceshan karin koobka si joogta ah hadana tartamada qaar ayaa lahaan jiray sharci u ogolaanaya inay heystaan koobka rasmiga ah.
Tusaale ahaan intii u dhaxeysay 1969 ilaa 2008, UEFA waxay laheyd sharci u ogolaanaya kooxaha inay heysan karaan koobka rasmiga ah ee European Cup ama Champions League haddii ay ku guuleystaan shan jeer ama seddex jeer oo isku xigta.
Kaliya shan kooxood ayaa heysta koobka rasmiga ah ee Champions League kuwaasoo kala ah Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool, AC Milan iyo Ajax.
Sharcigaas waxaa la bedelay ka hor xilli ciyaareedkii 2008-09, iyadoo haatan ay UEFA ceshato koobka rasmiga ah halka kooxda ku guuleysata Champions League la siiyo mid la soo minguuriyay.
Sidaasi darteed inkastoo Barcelona ay ku guuleysatay koobkeedii shanaad sannadkii 2015 hadana waa loo diiday in la siiyo koobka rasmiga ah.
Xaalad la mid ah tan Champions League ayuu sidoo kale lahaan jiray Koobka Adduunka.
Brazil ayaa sida la wada ogsoon yahay la siiyay koobka rasmiga ah ee Koobka Adduunka markii ay ku guuleysteen markii seddexaad sannadkii 1970.
Nasiibdarro Brazil koobka waa laga xaday dib danbana looma helin iyadoo la sheegay in tuugo ay dhalaalisay dahabka oo ay iibsatay.
FIFa ayaa joojisay sharcigii ahaa in wadan uu heysan karo koobka rasmiga ah haddii ay seddex jeer ku guuleystaan Koobka Adduunka, haatan FIFA ayaa ceshata koobka Rasmiga ah iyadoo xulkii hanta Koobka Adduunka la siiyo koob u muuqaal eg kan rasmiga ah oo biyo dahab la soo geliyay.